ခေတ်အဆက်ဆက် ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကြော်ငြာပုံစံတွေ | Mizzima Myanmar News and Insight
ခေတ်အဆက်ဆက် ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကြော်ငြာပုံစံတွေ
By အောင်သူရ၊ ရှုမဝအောင်
ကြော်ငြာ! ကျော်ရအောင် ညာတာလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စားသုံးသူလက်ထဲရောက်ရှိဖို့ မီဒီယာပေါင်းစုံကနေ ဆွဲဆောင်နေရတာပါ။ မြန်မာမှာဆိုရင်လည်းဒွေးတို့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ ခေတ်ကောင်းခဲ့တုန်းကဆိုရင်လည်း ကြော်ငြာခေတ်ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ အခုကခေတ်ပြောင်းသွားလို့ ရုပ်မြင်သံကြားမီဒီယာအပြင် အခြားမီဒီယာအစုံကနေကြော်ငြာလာနေပါပြီ။
အနီးစပ်ဆုံးအရင် ၁၀ နှစ်ကျော်အချိန်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ထောင်စုတွေဟာ ရုပ်မြင်သံကြားကလာတဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုအရအမိစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြဖူးတာပါ။
နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဇီးထုတ်ကနေစလို့ရွှေဆိုင် နောက်…..တစ်ရူးရွက်တွေအထိ ကြော်ငြာခဲ့ကြတာက အတော်လေးခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကနေဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ အခါမှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကြော်ငြာအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျခံတဲ့ နေရာမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းမီဒီယာပုံနှိပ်မီဒီယာ လက်ကမ်းကြော်ငြာ Billboard စတာတွေမှာ ဆန်းသစ်ပြီးကြော်ငြာလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ပြည်တွင်းက ထိပ်တန်းကြော်ငြာအေဂျင်စီတစ်ခုရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကတော့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တွေကကြော်ငြာတဲ့အပိုင်းမှာငွေ သိပ်မသုံးကြတော့ဘူးလို့ ပြောပြလာပါတယ်။
"သေချာတာကတော့ ကြော်ငြာဘတ်ဂျတ်ကကျသွားတယ်။ မနှစ်က ၁၅ နဲ့ ၁၆ မှာယှဉ်ရင် ကြော်ငြာဝင်ငွေက ၅ ရာခိုင်နှုန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်းအဲလောက်ပဲတိုးတယ်။ အဲဒီဥစ္စာက ငွေကြေးဖောင်းပွတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြော်ငြာနှုန်းတွေ တက်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှုန်းတက်ပြီးပေးရတာမျိုးကြောင့် လဲဖြစ်နိုင်တယ် အဲတော့ လူတွေကအဲတော့ လူတွေကသူတို့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုပိုပြီးတော့ မသုံးတော့ဘူး။" လို့ Mango Media Limited ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်အေးနှင်းဆွေက ပြောပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက် ကြော်ငြာဘတ်ဂျတ်အကုန်လုံးကို ရုပ်မြင်သံကြားတခုထဲမှာ အကုန်ကျခံတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ ငွေကုန်ကြေးကျနည်းအောင် တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ကြော်ငြာတာမျိုးလည်းတွေ့လာရတယ်လို့ သူမက ဆက်ပြောပါတယ်။
အခုတော့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးရဲ့ သူတို့ထုတ်ကုန် ပေါက်ဖို့ ဘယ်လိုရင်းနှီး မြှုပ်နှံနေသလဲ။
ရွှေသုနန္ဒီ အလှကုန်လုပ်ငန်းရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာချောက "ဒီပစ္စည်းထုတ်ပိုးမှုနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အရည်အသွေးလေးကို ကောင်းကောင်းလေး လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာ အမတို့ နမူနာတွေပေးတယ်၊ ပေးတဲ့အခါမှာဒီနမူနာကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့ ကြိုက်ပြီဆိုရင် ၀ယ်လို့ရပြီဆိုတော့ သုံးကြည့် ဒီနမူနာကိုကျမတို့ ကြော်ငြာတဲ့ နေရာမှာသုံးတယ်၊ နောက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းကို အကောင်းဆုံးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုကတကယ်ကိုသုံးစွဲတဲ့ သူလေကြော်ငြာတယ်ဆိုတာကတီဗွီမှာမင်းသမီးမင်းသားတွေသုံးပြီးမင်းသမီးမင်းသားတွေမှ မသုံးရင် ဒါကအလကားပဲလေ အဲဒါဆိုတော့ တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းက ပြည်သူလူထုဒီရွှေသုနန္ဒီကိုသုံးစွဲတဲ့ ကာစတန်မာတွေသာကြော်ငြာတဲ့ လူတွေပဲအဲနေရာမှာအမတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်" လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသားနီးရောဘတ်က မြန်မာပြည်မှာကြော်ငြာအေဂျင်စီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ လာခဲ့တာအချိန် ၃ နှစ်ကျော်တောင် ရှိနေပါပြီ။ ဒီအတွက်လည်းဒီမှာစျေးကွက်နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။သူဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တုန်းကဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ရုပ်သံကြော်ငြာလိုမျိုးပုံစံတစ်ခုတည်းကနေပဲပုံသေကြော်ငြာဖို့ စိတ်အားထက်သန်ကြတယ်လို့ ပြောပြလာပါတယ်။
Synapse 360ံAdvertising Agency ရဲ့ တည်ထောင်သူ နှင့် Operation Director နီး(လ်)ရောဘတ်က "ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်..နိုင်ငံခြားကဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ဆံရမယ့် သူကအတူတူပဲလေ။ကုန်ပစ္စည်းတွေဆီမှာအရည်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိတာပဲလေ..ဒါက ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က သုံးစွဲသူတွေကို ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဆိုတာပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကိုရောက်တုန်းကဆိုရင် ဒီကအမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများက မီဒီယာတစ်ခုတည်းကပဲ ကြော်ငြာဖို့ပဲတွေးတတ်ကြတယ်။" လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
အခုတော့ မီဒီယာမျိုးစုံကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ငြာလာတွေကို မြင်တွေ့လာနေရတယ်လို့ သူက ဖြည့်စွပ်ပြောဆိုလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းတွေကို လုပ်ငန်းရှင်တွေရော ပြည်သူတွေရောကောင်းကောင်းနားလည်ရင် လုပ်ငန်းတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ပါ ပြောပြထားပါသေးတယ်။